Qolka Qolka Musqusha
Axad 28 Bisha Labaad 2021
Qolka Qolka Musqusha Si aan uga duwanaano booska bandhiga caadiga ah, waxaan u qeexnaa booska asal ahaan xoojin kara quruxda badeecadda. Qeexitaankan, waxaan rabnaa inaan abuurno marxalad waqti ay badeecadu iskeed isugu ifin karto si iskeed ah. Sidoo kale waxaan abuurnaa waqti dhidib ah si aan u tusno shey kasta oo muujiyey booskan waxaa laga sameeyay waqtiyo kala duwan.
Dugsiga Caalamiga Ah
Dugsiga Caalamiga Ah Qaabka qaab dhismeedka fikradda ee Iskuulka Caalamiga ah ee Debrecen wuxuu astaan u yahay ilaalinta, midnimada iyo bulshada. Howlaha kaladuwan waxay u muuqdaan sida geesaha iskuxiran, alwaaxyada xarig lagu soo taago xargaha. Jajabinta booska waxay abuurtaa qaybo kala jaad jaad ah bulshada inta udhaxeysa fasalada. Khibradda booska sheeko ee cusub iyo jiritaanka dabiiciga ah ee joogtada ah waxay ka caawisaa ardayda fikirka hal abuurka iyo muujinta figradahooda. Wadooyinka loo maro beerta waxbarasho ee bannaanka u dhow iyo kaynta waxay dhammaystiraan fikradda wareegga iyagoo abuuraya kala-guur xiiso leh oo u dhexeeya dhismaha iyo deegaanka dabiiciga ah.
Jimco 26 Bisha Labaad 2021
Deganaanshaha Gaarka Guriga oo dhan waxaa loo adeegsaday shey fudud laakiin casri ah iyo fikrad midab leh. Darbiyada cad, sagxadaha alwaax alwaax ah iyo dhagaxa nuuradda ee meesha loogu talagalay musqulaha iyo qiiqa qiiqa. Faahfaahinta sida saxda ah loo farsameeyay waxay abuurtaa jawi raaxo leh oo xasaasi ah. Sida saxda ah ee loo yaqaan 'vistas' waxay goaansataa meesha lagu noolyahay ee saboolka ah L-qaabeeya.
Xafiisku Dhismuhu wuxuu ku saleysan yahay "saddex xagal" oo leh muuqaalka muuqaalka xoogga leh ee qaabka joomatariiga asalka ah. Haddii aad hoos uga soo fiiriso meel sare, waxaad arki kartaa wadarta shanta xagal oo kaladuwan Isugeynta saddex xagal cabbirro kaladuwan ayaa macnaheedu yahay "aadanaha" iyo "dabeecadda" ayaa door ka ciyaara meeshii ay ku kulmaan.
Guryaha La Deggan
Arbaco 24 Bisha Labaad 2021
Guryaha La Deggan Xaqiiqda ah in nolol raaxo leh ka dib howlgabnimada taas oo inta badan ka sameysa dhismayaasha buuraha leh waxaa lagu xaqiiqsaday naqshad joogta ah oo qaab caadi ah aad looga mahadceliyay. Si loo helo jawi hodan ah. Laakiin markan maahan naqshadaha guryaha ee waa guri gaar ah. Kadibna marka hore waxaan bilownay inaan dhisno qaab dhismeedka salka ku haya inuu awood u leeyahay inuu ku noolaado nolol caadi ah si raaxo leh isagoon caqli gal ahayn qorshaha oo dhan.
Xarunta Iibintu Qolka Qolka Musqusha Dugsiga Caalamiga Ah Deganaanshaha Gaarka Xafiisku Guryaha La Deggan